OnePlus 6T wuxuu bilaabaa inuu helo Android 10 qaab xasiloon | Androidsis
Laba toddobaad ka hor in Beta Android 10 waxaa si rasmi ah loogu bilaabay OnePlus 6T iyo 6. Marka isticmaaleyaasha ka tirsan barnaamijkan beta waxay marin u heli karaan noocaan cusub ee nidaamka qalliinka. Waxay kuxirantahay sida wajigan beta uu isubadali lahaa, soosaarida nooca daganaashaha ah wuxuu qaadan karaa waqti badan ama kayar.
Xaaladdan oo kale, sugitaanku wuxuu ahaa mid si gaar ah u gaaban, ugu yaraan kiiskii OnePlus 6T. Maadaama taleefankani yahayBilow inaad kuhesho Android 10 hadda qaab deggan. Isticmaalayaasha leh dhamaadka sare waxay durbadiiba bilaabeen inay helaan cusbooneysiintan si rasmi ah, taas oo u oggolaanaysa iyaga inay horey u haystaan ​​noocyadan.
Isticmaalayaasha adduunka oo idil waxay sidoo kale marin u helayaan Android 10 qaybteeda xasilloon ee OnePlus 6T. Marka waxaa la filayaa in saacadaha iyo maalmaha soo socda la yiraahdo cusbooneysiinta ayaa ku sii fideysa adduunka. In kastoo hada aanan hayn xogta taariikhahooda.
Xilligan kaliya qaabkan ayaa marin u leh ayaa sheegay in version deggan. Waxay umuuqataa in isticmaaleyaasha haysta OnePlus 6 ay wali sugi doonaan in yar oo dheeri ah illaa inta la sheegay in si rasmi ah loo sii daayay kiiskooda. Sidoo kale munaasabadan taariikh lama siinin.
Waxa caadiga ah waa maalmahan soo socda Android 10 OTA ee OnePlus 6T wuu sii ballaaranayaa Dunida oo dhan. Maaddaama isticmaaleyaasha adduunka ay soo sheegaan inay mar horeba marin u leeyihiin. Had iyo jeer waxay qaadataa dhowr maalmood inay kula soo xiriirto dhammaan adeegsadayaasha taleefankan.
Akhbaar wanaagsan, oo muujineysa sida calaamaddu ay ka mid tahay kuwaas fiican ayaa u hoggaansamaysa cusbooneysiinta Android 10. Maaddaama ay si dhakhso leh ugu bilaabayaan taleefannadooda. Markaa haddaad haysatid OnePlus 6T, maalmo yar gudahood waxaad horeyba uheli doontaa Android 10 qaab deggan, haddii aadan horey u helin OTA ayaa yiri.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus 6T wuxuu bilaabaa inuu helo Android 10 xasilloon